Sina pp boaty mitafo ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy entana | Sihai
Pp mitafo fanitso azo ampiasaina amin'ny express, ara-dalàna, dia ho an'ny boaty express, fandefasana entana. Pp hollow sheet dia rafitra rindrina kambana, mora miolaka izy io, ny rafitra rindrina kambana dia tonga lafatra amin'ny fiarovana ny vokatra amin'ny fandefasana azy. Pp hollow sheet azo namboarina karazana boaty fonosana maro, fitoeran-plastika ho an'ny express, ny boaty express koa dia afaka manampy fizarana ho an'ny kitapo samihafa sy express.
Ny boaty pp hollow sheet express dia mora mivalona, ​​mamonjy habaka, mitondra mpanjifa manana traikefa fampiasa avo lenta. Ny boaty pp poakaty express boaty dia vita amin'ny hazavana sy fitaovana maharitra, miaraka amin'ny rano mahery, tsy miovaova, tsy mirehitra, anti-static, anti-corrosion, anti-Wear, anti-UV, anti-vibration, maripana ambany ambany ary asa hafa. Ireo fiasa ireo dia miantoka ny fahamendrehana sy ny fiasan'ny boaty amin'ny lafiny lehibe, tsara izy io amin'ny fiarovana ireo vokatra rehefa mandefa sy mihetsika. Pp boaty express corrugated azo namboarina pirinty ho an'ny vokatra samy hafa sy ny sary famantarana, mazàna ny pirinty dia silkscreen, ny sasany afaka manao UV pirinty ho an'ny ivelany ampiasaina.
Previous: pp boaty misy banga
Manaraka: pp ravina miaro gorodona